Soterre Zvekuronga Ongororo - Motio
musha 9 Products 9 Soterre 9 Soterre Yekuronga Ongororo
Soterre yeIBM Kuronga Ongororo naWatson
Isu tinoita kuti nharaunda dzako dzigadzikane uye dzive dzakachengeteka.
Kuronga, bhajeti, uye kufanofungidzira zvikamu zvakakosha-zvebhizimusi chero ripi zvaro. Aya mashandiro ebasa anoda ekuchengetedza mambure kuti ave nechokwadi chekushomeka kwekuzorora uye kutsetseka asi nekukurumidza shanduko manejimendi manejimendi uye shanduro yekugona kugona. Kazhinji, izvi zvinodiwa zvinotora mubhadharo mukusimudzira kukura. Isu tinopa iyo mambure, tisingabatanidze timu yako kana vashandisi.
Soterre yeIBM Kuronga Ongororo naWatson inopa:
ZZero-yekubata vhezheni yekudzora
ZZero-kukanganisa kune vanyori
ZTora shanduko nenjere
ZYakavakirwa-Mune shanduko danda
ZRollback shanduko (s)
ZHupenyu hwehupenyu hwekuendesa mapurojekiti uye zvinhu
ZDhipatimendi risina sevha rinotangazve
ZKufambisa mabasa eakakosha macircuit